थाहा खबर: भ्रष्टाचार प्रमाणित भए राजनीति छाड्छु, सजाय भोग्छु
विप्लवको व्यवहारबाट प्रभावित भएँ
शनिबार राति दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीलाई नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले अपहरण गर्‍यो। उनलाई विप्लव समूहका कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीविरुद्ध सुराकी गरेको र गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आफ्नै घरबाट अपहरण गरे।
अपहरणमा परेको १९ घण्टापछि उनलाई प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको थियो। अपहरणमुक्‍त भएर आएपछि अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीसँग विप्लव समूहको अपहरण र गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको सेरोफेरोमा रहेर दैलेखबाट थाहा खबरकर्मी उदयराज अधिकारीले गरेको कुराकानी :
तपाईंलाई अपहरण गर्नुको कारण के रहेछ?
मलाई घरबाट अपहरण गरेको केही समयसम्म अपहरण पर्नुको कारण केही जानकारी दिइएन। बिहान उज्यालो भइसक्दा श्रीमती र म सँगै हुँदा मैले उनीहरूलाई दुईपटक सोधेँ उनीहरूले 'राज्यले हाम्रा ६०० कार्यकर्तालाई अपहरण गरी थुनेको छ। त्यसैको बदलामा राज्यलाई चुनौती दिनलाई जनप्रतिनिधि अपहरण गर्ने पार्टीको नीतिअनुसार पक्राउ गरेका हौँ' भने।
अपहरण गरेर तपाईंलाई कहाँ पुर्‍याए?
म शनिबार राति १२ बजेतिर अपहरणमा परेँ, उनीहरूले १२/१५ घण्टापछि कालिकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिकाको छात्ती भन्‍ने स्थानमा पुर्‍याएका थिए। पछि सुरक्षाकर्मी त्यहाँ पुगेर हवाई फायर भएपछि उनीहरूले मलाई छोडेर भागेका थिए। त्यसपछि म अपहरणमुक्त भई सुरक्षाकर्मीको मातहतमा आएँ।
तपाईंलाई अपहरण गरेर लैजाँदा बाटोमा उनीहरूको व्‍यवहार कस्तो थियो?
अपहरण परेको केही समय त म डराएको थिएँ, पछि हिँड्दै जाँदा उनीहरूको व्‍यवहारबाट म प्रभावित भएँ। मैले नसोचेको गरी उनीहरूले मलाई सम्मान र सद्‍भावपूर्ण व्‍यवहार गरे। सुरक्षा, स्वास्थ्य र खानपिनबारे पनि एकदमै ख्‍याल गरे।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले तपाईंलाई पार्टीविरुद्ध सुराकी गरेको आरोप र गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ वास्तविकता के हो?
विप्लव नेतृत्वले मलाई जुन आरोप लगाएको छ, त्यो सरासर कपोलकल्पित र झुट्टो हो। यसमा कुनै सत्यता छैन। विप्लव समूहले जुन आरोप लगाएको छ, त्यो कदापि सत्य होइन। मलाई अपहरण गर्ने समूहले मलाई भनेको के हो भने राज्यका प्रतिनिधिलाई अपहरण गर्नुपर्ने पार्टीको नीति भएकाले हामीले तपाईंलाई अपहरण गरेका हौँ भनेका थिए।
अपहरण गर्ने समूहले मलाई विज्ञप्तिमा आएको जस्तो केही पनि भनेनन्। विज्ञप्तिमा जुन कुरा आएको छ त्यो बनावटी हो। विज्ञप्तिमा त्यस्तो कुरा आएको छ भने म दु:ख व्यक्त गर्दछु। यदि विप्लव समूह कम्‍युनिष्ट हो भने त्यस्ता किसिमका शब्द प्रयोग गर्नु खेदजनक र गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले उक्त शब्द राखिएको मैले ठानेको छु।
सुराकी गरेको भन्‍ने कुरा पनि सरासर गलत हो, अहिलेसम्म मैले कसैको पनि सुराकी गरेको छैन, आउँदा दिनमा पनि गर्ने छैन। कसैको सुराकी गर्नुपर्ने आवश्‍यकता पनि छैन, कुरा गर्नु परे भेटेरै कुरा गरिन्छ, तर यस्ता गैरजिम्मेवार कुरा मबाट अहिलेसम्म भएका छैनन्। उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका कुरा फिर्ता लिनुपर्छ।
म गाउँपालिका अध्यक्ष भएकै नाताले ५०० रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको भेटिए विप्लवका साथीले मात्र होइन मेरो पार्टीले पनि कारबाही गरोस् राज्यपक्षबाट छानविन होस् भ्रष्टाचार प्रमाणित भए म आजीवन राजनीतिको र उच्चारण गर्दिनँ, गाउँपालिका अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन्छु र राज्यले तोकेको सजाय भोग्‍न तयार छु। मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने काम कुनै पनि व्‍यक्ति, संगठन र पार्टीबाट हुनुहुँदैन।
अहिले सुरक्षाका हिसाबले गाउँपालिकामा फर्किने अवस्था छ कि छैन?
राज्‍यले जनप्रतिनिधिलाई दिएको सुरक्षाबारे के भन्‍नुहुन्‍छ?
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये तपाईंलाई नै पहिलो पटक किन अपहरण गरेका होलान्?
दैलेखका अरू स्थानीय तहमा सुरक्षा चुनौती कस्तो देख्‍नु भएको छ?
चुनौती नभएको ठाउँ कतै पनि छैन, सबै ठाउँमा केही न केही चुनौती छन्। त्यसको सामना राज्यले कसरी गर्ने भन्‍ने हुन्छ हामी पनि सरकार हौँ हाम्रो पनि दायित्व छ, सुरक्षा निकायले पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ देशको भौगोलिक बनावटले पनि सुरक्षा चुनौती छ।
दैलेख त एक पहाडी जिल्ला भएकाले समस्या छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्‍ने कुरामा सरकार, सुरक्षा निकाय र गाउँमा भएका स्थानीय सरकारका सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ, राज्यले सबै ठाउँका जनता जनप्रतिनिधिको सुरक्षामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। यो राज्यको कर्तव्‍य हो।
अपहरित अध्यक्ष शाहीकी श्रीमती सकुशल, शाहीको अवस्था अझै अज्ञात
दैलेखका गाउँपालिका अध्यक्षमाथि सुराकी र भ्रष्टाचार आरोप